ကာတွန်း – နရီထက် | PoemsCorner
ကာတွန်း – နရီထက်
နောက်ခံစကားပြောသူတွေ ငါ သိချင်တယ်
စိမ်းလန်းတဲ့ ကမ္ဘာလေး …
ပုံသေ ဖန်တီး ထားလို့ ငါ ကြိုက်သေးတယ်
Supernatural power တွေနှင့်
ကမ္ဘာကျော် ကရေကချာ ရုပ်ပြောင်တွေက
ငေးမောကြည့်မိလိုက်တာ ခဏခဏ ပါပဲ…
သူတို့ဆီက ခဏလောက်တော့ ဌားချင်သေးတယ်
စိတ်ကူးတွေ အကြာကြီး ယဉ်ခွင့်ပေးပါ…။ ။
( ၁၁ ၊ ဇွန်လ ၊ ၂၀၁၁ )
In: ကဗျာ Posted By: Nayihtet Date: Jun 11, 2011
ရွက်သစ်ခြွှေ – နရီထက်
ဖုန်းထဲကမင်းအသံ တိတ်တခိုး နားထောင်နေမယ် – နရီထက်
ရပ်တန့်မသွားသော ဘ၀များ – နရီထက်
မရှိခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်… – နရီထက်
Leave comment6Comments & 376 views
By: myintmo at Jun 11, 2011
အတွေးထက်ထက်… အရေးနက်ခဲ့ရင် … ကဗျာဆရာရဲ့ အာဘော်ကို သိရှိခံစားခွင့်နည်းပါးစေတယ်လေး… ညီမလေး… ဒါပေမဲ့ ကဗျာဖတ်သူ စာချစ်သူတွေက ကဗျာကို ရည်ရွယ်ချက်… ခံစားချက်… အတွေးတွေ စုံလင်အောင် ဖတ်ခွင့်ရှိပါတယ်… အစ်ကိုကြီးဖက်ကတော့ အမြဲတမ်း ကြိုးစားပြီး ရေးသားနေပါ့မယ် … င့ါညီမငယ်
By: Nayihtet at Jun 11, 2011
ကောင်းတယ် ဆိုတာထက် ဆန်းတယ်ကိုကြိး ဒိအပှဒ်လေးတွေဆို ပိုမိုက်တယ်မျက်တောင် အဖွင့်အပိတ်နည်းပေမဲ့
ရုပ်သေမျက်နှာတွေက ကြည့်လို့ကောင်းတယ်န်းကဝေကို မနှစ်သက်မိပေမဲ့
စိတ်ကူးတွေ အကြာကြီး ယဉ်ခွင့်ပေးပါ…။ နော့် ကောင်းတယ် ဆက်အားပေးနေမယ် နော်
By: thuya at Jun 11, 2011
ရုပ်အမူအရာ… စကားပြောတွေ… စကားလုံးတွေက …. မသိသာပေမဲ့…. အရေးကြီးတဲ့အခါ …. ပိုပြီး အသက်ဝင်ပါတယ်…. သိခွင့်မရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက အစ်ကိုကြီးတို့လူသားတွေကို အရိပ်လောက်တော့ ကျပေးထားပါတယ်… အသိတွေ… သတိတွေ… က ခရာကျပါတယ်…ငါ့ညီငယ်…
ကျွန်တော်အရန်းကြိုက်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါပဲ အစ်ကို နရီထက်.။
စသားရိုးရိုးလေးတွေနဲ့ ပြောင်မြောက်အောင်ရေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာ ကောင်းလေးဆိုလည်းဟုတ်တယ်။
သူတို့ဆီက ခဏလောက်တော့ ဌားချင်သေးတယ်)
အစ်ကို့ ကဗျာ တော်တော်များများ ကို ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်.။
အမြဲလည်း အားပေးနေပါတယ် .။
ကိုနရီထက် အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျောက် ၊ ကျော်ကြားပါစေ….။။။
By: ဇော်သက်ဦး(Ayatekalay) at Jun 12, 2011
ကျေးဇူးပါ… ငါ့ညီ…. ဆက်လက်ပြီး ကြိုးစား ရေးသားနေမယ်… ငါ့ညီ…
By: Nayihtet at Jun 12, 2011